Home > Travel Europe > Nahoana Train dia iray amin'ireo fombafomba azo antoka indrindra Fitaterana
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 11/12/2020)
The polemic amin'ny nampiofana oharina fiara fitateram-bahoaka any Eoropa dia tsy misy fiafarana lohahevitra, nahazo ny olona rehetra ny heviny momba. fa, isika dia miresaka momba ny fiarovana, Ary raha isika - no ampy? Fiarovana ny fitaterana voafidy dia tokony avy aloha, ary isika raharaha amin'izao fotoana izao. matetika, Matetika ny olona hanatona ity lohahevitra ity amin'ny fomba hafa, arakaraka ny mpitety safidinao. koa, ny vaovao farany momba ny loza rentsika manerana izao tontolo izao lafin-javatra ao amin'ny, ihany koa. Raha ianao zara raha mandre nisy fiaran-dalamby fianjerana any ho any, izany no mitranga. Toy ny ataony amin'ny rivotra, fiara, fiara fitateram-bahoaka sy ny fitaovam-pitaterana. Na izany aza, antontan'isa dia mazava - ofisialy, ny lamasinina dia iray amin'ireo fomba azo antoka indrindra ny fitaterana izao andro izao! Toy izany koa ny fiarovana ambaratonga mandeha ny fifamoivoizana an'habakabaka raha hafa rehetra fitaovam-pitaterana hanaraka.
Ny lamasinina dia iray amin'ireo fomba fitaterana azo antoka indrindra amin'ireo firenena rehetra?
No, tsy. Tsy ny rehetra lalamby sy ny fiaran-dalamby avy amin 'ny toetra mitovy. Rehefa miresaka momba ny lalamby Travel fiarovana, Matetika isika miresaka ny momba azy io ao anatin'ny firenena iray manokana. amin'ny ankapobeny, rail Travel dia tena azo antoka, nefa mbola tsy manimba maso ny toerana misy ny firenena ny lalamby sy ny fifandraisana raha te-mandeha lamasinina.
Ohatra, vao fito taona lasa izay ny U.S. isaina 32,367 road namoizana aina, 570 lalamby namoizana aina, ary 485 rivotra namoizana aina. Ireo no saro isa fotsiny, nefa tsy mety mankatò hoso-doko tsara tarehy mampiseho sary mazava fa fiaran-dalamby sy ny rivotra Travel Travel Samy azo antoka kokoa noho ny be road Tsidika.
Izay tokony ho môtô. tamim-bazivazy (tsy dia misy zavatra mampihomehy any) dokotera zatra manondro môtô (i.e., ny loza vokatry ny mitaingina iray) toy ny “mpamatsy tsingerina.” toa, ireo loza matetika dia matetika sy mahafaty fa mamokatra be ny taova mpamatsy vola. Traveling in ny sasany amin'ireo fiaran-dalamby haingana indrindra any Eoropa no mahatonga ny loza maro.
Raha samy lalamby sy ny fiaran-dalamby dia ampy nikarakara (i.e., serviced tapaka, foana, Nosoloana rehefa ilaina, etc.), ianao ve vavolombelona zara raha misy loza ity fitaovam-pitaterana. Iray amin'ireo antony dia ny, Tsy toy ny lalana fitaterana, misy fomba tokana sy Travel iray dia midika hoe (i.e., fiaran-dalamby) manaraka lalana iray ho amin'ny toerana farany. Tsy misy fiara tsy nampoizina avy ny lalanao, mahatonga anao very ny fanaraha-maso ny kodia. Tsy misy mpiasa miasa sy ny hifandimby tampoka, sy ny saina ary ny toe-javatra mety hampidi-doza. Mety ho iray amin'ireo antony mahatonga fitaterana lamasinina nijanona iray amin'ireo fomba azo antoka indrindra ny fitaterana hatreto.
Tato ho ato, ny olon-drehetra ny vesaran'ny asa betsaka loatra, ary mitsambikina avy ny fiara seza ny seza any am-piasana sy ny mifamadika amin'izay, manana ny sasany amin'ny vatany ny fotoana eo anelanelan'ny dia zava-dehibe. Ny fananana fahafahana mba hiala sasatra eo amin'ny fiaran-dalamby rehefa niraharaha dia tena iray amin'ireo antony maro mahatonga ny olona hisafidy fiarandalamby.
Raha niresaka ny lavitra fiarandalamby, izy ireo dia mahafinaritra safidy handeha rehefa mamela ny sasany haka aina amin'izay. Mahazo avy hevitra ny teboka A B in 2 ora amin'ny fiaramanidina mahomby, Tsy misy atahorana fa ho an'ny fahasalamana? No manohitra ny bilaogy lahatsoratra “Train dia iray amin'ireo fombafomba azo antoka indrindra Fitaterana”? afaka ny vatana sy ny saina fandraisantsika ny fiovana tampoka ny toetrandro, tsindry avy amin'ny atmosfera, ary ny zavatra hafa rehetra ao anelanelan'ny? zara raha. Izany no antony mandeha ny hanofana around Europe manome ny vatanao ny fahafahana hatao zatra ny fiovana sy ny fandraisana azy ireo ao amin'ny fomba ara-pahasalamana.
entana (Safety) soa
Tsy indrindra ny fahasalamana na ny fiarovana tombontsoa, fa ny fiarovana entana tsara tarehy milalao andraikitra manan-danja ho an'ny mpandeha sasany. Tsy maninona raha entana fahazavana ho an'ny lavitra na tsia, tianao ny entana in miray. Ny ankamaroan'ny mpandeha dia mpanangona ny asa tanana sarobidy, sarivongana, antontan-taratasy, sns. ary tiany ny fahatsiarovana aminy. Indrisy, rivotra Tsidika dia fantatra amin'ny valizy very sy simba izay tsy dia misy loatra rehefa mandeha lamasinina ianao. Plus, ny entana dia eto aminareo mandrakariva, ka tsy misy maharombaka azy eo entana milaza. Ity ve ny antony hoe ny lamasinina dia iray amin'ireo fomba azo antoka indrindra ny fitaterana? Mieritreritra toy izany isika.
Train Travel dia tsy ny olona rehetra ny kapoaky ny dite, fa tena dia iray amin'ireo azo antoka indrindra kaopy, ary ny be indrindra mahafatifaty ireo, koa. Amin'ny manaraka ianao planning ny vakansy toerana halehany, Diniho izay Train dia iray amin'ireo fomba fitaterana azo antoka indrindra, ary aza misalasala manome fotoana ny fitsangatsanganana lamasinina. Mahazo aina tsara, azo antoka, fa faran'izay mahafatifaty, ary ny zava-nitranga ianao hahatsiaro mandrakizay. Raha toa ianao ka mandeha manodidina Eoropa, Contact us at https://www.saveatrain.com au livre ny tapakila tao anatin'ny telo minitra, ary nankafy ny soa aman-tsara manomboka mandeha amin'ny lalamby!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-safest-transportation%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#Fashion malefaka Ravel #azo antoka #safetravel #fitaterana